Podcast 12 × 27: Isu tinoongorora Apple chiitiko | Ndinobva mac
Podcast 12 × 27: Isu tinoongorora chiitiko cheApple
Nezuro husiku # podcastApple episode yaive yakanyanyisa kufunga huwandu hwe nhau kuti Apple yakaratidza maawa apfuura. Mupfungwa iyi tinogona kutaura kuti kunyangwe mamwe akawanda kupfuura zvataitarisira.
Iyo Cupertino firm yakaisa "nyama yese pane iyo grill" nekuuya kweyakavandudzwa Podcast app, iyo inowedzera yakabhadharwa kunyoreswa, nyowani Apple TV, iyo yakasvika kusvika mushure memakore akati wandei eguhwa maAirTag, iyo iMac nyowani, iPhone 12 uye 12 Pro yepepuru uyezve iyo nyowani 11-inch uye 12,9-inch iPad Pro ine mini-LED skrini uye M1 processor mukati.
Isu tine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe wevaya varipo vakashamiswa nenhamba yezvigadzirwa zvakatangwa nezuro, asi mharidzo yakaita seiyi yanga ichitotamba. Muawa imwe yechiitiko takaona yakanaka yakanaka mawoko enhau uye pano tinozvikurukura zvese nevavanoshanda navo kubva kuActualidad iPhone:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Podcast 12 × 27: Isu tinoongorora chiitiko cheApple
Iyo Apple TV 4K ya2017 inomira kutengeswa asi yechina chizvarwa Apple TV inosara